RASMI: Isku aadka heerka Group-yada Copa America oo la sameeyey… (Yay ku aadeen Brazil, Argentina & Uruguay?) – Gool FM
(Rio de Janeiro) 25 Jan 2019. Waxaa la sameeyey isku aadka heerka Group-yada Copa America 2019, iyadoo xulka marti gelinaya koobkan ee Brazil uu galay group fudud tartanka sanadkan, waxaana uu Group A ku wajihi doonaa xulalka Bolivia, Venezuela iyo Peru.
Isku aadka ayaa xalay lagu qabtay Magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, Lionel Messi iyo xulkiisa Argentina ayaa Group B kula jira Colombia, Paraguay iyo xulka qaranka martida ah ee Qatar.
Dalalka Japan iyo Qatar ayaa Sanadkan marti ahaan qey uga ah Copa America 2019.
Group-ka saddexaad ee C xulka qaranka Uruguay ayaa tartankan ku furan doona kulankooda ugu horreeya Ecuador, kaddibna waxa ay la ciyaari doonaa xulka martida ah ee Japan ka hor inta aysan kulankooda ugu dambeeya qaabilin qaranka difaacanaya koobkan ee Chile.
Labada xul ee ugu sarreeya Group kasta oo lagu daray labada xul ee ugu fiican ee ku dhammaysta kaalinta saddexaad ayaa soo gudbi doonta oo ciyaari doonta quarterfinal-ka ama siddeed dhammaadka tartankan.
Xulka Brazil waxa uu tartankan ku furan doonaa oo uu madaxa gelin doonaa Bolivia 14 bisha June kulan ka dhici doona magaalada Sao Paulo ee garoonka Morumbi stadium, kaddib waxa ay la dheeli doonaan Venezuela, halka sidoo kale ay wajihi doonaan xulka Peru oo tan iyo sanadkii 1982-kii markii ugu horreysay sanadkii hore yimid koobkii Adduunka ee Ruushka.
Argentina ayaa kulankooda koowaad qaabili doona Colombia 15 bisha June ciyaar ka dhici doonta Salvador ka hor inta aysan afar maalin kaddib Belo Horizonte kula ciyaarin xulka Paraguay, kulankooda ugu dambeeyey ayey Messi iyo xulkiisu la dheeli doonaan Qatari kulan ka dhici doona Porto Alegre isla 23-ka bisha June.
Dhinaca kale Uruguay ayaa kulankooda koowaad waxa ay wajihi doonaan 16 bisha June naadiga Ecuador ciyaar ka dhici doonta Belo Horizonte, kaddibna waxa ay la kala ciyaari doonaan Japan iyo Chile.
Halkaan hoose ka eeg sida la isugu aadiyey xulalka heerka group-yada Copa America 2019:-
Chelsea oo u soo baxday Final ka Carabao-Cup kaddib ciyaar xiiso iyo Xamaasad lahayd ay dhagta Ciida ugu dareen Tottenahm....+SAWIRRO